Apple inoenderera nekuvandudza iyo Taptic Injini mumarabhoritari ayo | IPhone nhau
Apple inoenderera nekuvandudza iyo Taptic Injini mumalabhu ayo
Iyi hunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji ndeye yakasarudzika vhezheni yekutenda, nekuda kweiyo Taptic Injini zvinokwanisika kuteedzera kudedera panzvimbo chaidzo dzechigadzirwa Yaive imwe yezvinhu zvitsva zvakaunzwa neApple muiyo iPhone 6s pamwe neiyo 3D Kubata tekinoroji, zvese, mukubatana kwavo kwakakwana, zvinogona kuvandudza ruzivo rwevashandisi kumatanho akakosha. Asi hakusi kugadzira mukurumbira uye kukuisa iwe kurara, uye zvinoita sekudaro Apple iri kushanda nesimba mumalebhu ayo eCupertino nechinangwa chekuvandudza zvakanyanya iyo Taptic Injini, uye zvinoita sekunge hunyanzvi uhu huchauya kwatiri mugore ra2017.
Saka isu tinogona kutaura zvakanaka zvakare kuTaptic Injini yeiyo iPhone 7, uye isu tichafanirwa kumirira iyo iPhone 7s. Sezvakataurwa neiyo portal Nikkei, Kwave kuburitsa kwakatitungamira kufunga kuti Apple iri kugadzirisa nzira iyo kudedera kweiyo iPhone inobata nesu, chimwe chinhu chinorumbidzwa, kunyangwe hazvo iyo Taptic Injini yakanaka kwazvo pachayo, havagone kuvhura tekinoroji uye ita kuti imire munguva yakapfuura, mukuwedzera, Zvinotaridza sekuti Taptic Injini ichaenda kunonamira kutenderera kwenguva refu, saka kuzvivandudza ndiko kufambira mberi kwechisimba kwechero Hardware yatinowana muiyo iPhone. Ese izvo kana kutsakatika, sezvo zvinoita sekunge zvichaitika ne3.5mm Jack pane iyo iPhone 7.
Nekushandurwa kutsva kuri kuitwa kune iyo Taptic Injini, ivo vanoda kuti vashandisi vakwanise kunzwa zvakanyanya kuomarara kutekenyedzwa, uko kunotumira rumwe ruzivo kwatiri tisingatombofaniri kuvhenekera iyo skrini. Zvinotaridza kuti ivo vanoda kushandura iyo vibration kuita imwe nzira yekudyidzana. Ndokunge, sekutaura kwatakaita, iyi tekinoroji haizosvika kusvika 2017, ndiko kuti, mune inofungidzirwa iPhone 7s kana iPhone 8. Isu tinorangarira kuti WWDC 2016 ichasvika mumazuva mashoma uye muApple News tichazvivhara kusvika paminiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Apple inoenderera nekuvandudza iyo Taptic Injini mumalabhu ayo
Vhidhiyo nyowani yemamiriro emabasa eApple Campus 2
Sago Mini Road Rwendo rwemahara kune yakatemwa nguva seapp yevhiki